Ahoana no tokony tsy hitovizan'ny paikadin'ny media sosialy B2B amin'ny paikady B2C | Martech Zone
Ahoana no tokony tsy hitovizan'ny paikadin'ny media sosialy B2B amin'ny paikady B2C
Alahady, Martsa 27, 2016 Alahady, Martsa 27, 2016 Douglas Karr
Rehefa manohy mamaky momba ny paikadin'ny media sosialy an-tserasera ianao, ny ankamaroan'ny fampahalalana ho an'ny paikady sosialy dia miompana amin'ny orinasa-to-mpanjifa (B2C). Saingy misy fahasamihafana goavana eo amin'ny tetikady B2C sy Business-to-Business (B2B). Andao hodinihintsika ny sasany amin'izy ireo:
Fanapahan-Maker - raha ny fanapahan-kevitry ny fividianana B2C dia mety hanana tsingerina fohy ary miankina amin'ny mpividy na ny mpivady manao ny fividianana, ny fanapahan-kevitry ny orinasa matetika dia manana ambaratonga maro amin'ny fankatoavana sy ny fividianana tsingerina lava kokoa.
Results - rehefa mandray fanapahan-kevitra ratsy amin'ny fividianana entana ny mpanjifa dia tsy mitovy amin'ny orinasa ny sazy. Ny mpandraharaha iray dia mety hahavery ny fitokisan'ny fitantanana azy, mety ho very asa mihitsy aza, ary mety ho very karama na tombony raha toa ka tsy mahatratra ny fanantenana ny vokatra na ny serivisy.
Volume - na dia mety hitovy aza ny maritiam-bola, ny habetsahana ilaina hanatratrarana ny tanjon'ny varotra matetika dia samy hafa be. Ny mpividy B2B matetika dia miasa amin'ny vondrona antenaina kely kendrena.
Talent - ny tsingerin'ny fividianana fohy sy ny habetsaky ny volam-be dia mitaky ezaka mafy amin'ny marketing sy dokam-barotra. Ny B2B dia mitaky marketing sy dokam-barotra tsara, saingy mainka aza izany ny ekipa mpivarotra tsy mampino hanontany ny mpivarotra sy hanampy azy ireo. Ary tsy amin'ny fivarotana ihany, fa manampy azy ireo amin'ny ezak'izy ireo amin'ny ankapobeny. Ny mpivarotra izay atokisana mpanolo-tsaina ary fananana amin'ny indostrian'izy ireo no mahomby indrindra.
izany lahatsoratra avy amin'ny Sprout Social antsipirihany ny ankamaroan'ny tetika ilaina hampidirana mahomby Paikadin'ny media sosialy B2B.
Noho ny antony sasany, orinasa B2B maro no niady tamin'ny fahazoana ny marketing amin'ny haino aman-jery sosialy na ny tsy firaharahiany izany. Na eo aza ny fahombiazana hitan'ny orinasa B2C tamina media sosialy, ny orinasa B2B dia mbola miantehitra amin'ny tetika nentim-paharazana toy ny antso mangatsiaka sy ny fanatrehana ireo fotoam-pivarotana tambajotra orinasa. Ireo tetikady ireo dia mbola mandaitra, saingy tsy tokony hampiasaina hisolo ny media sosialy. Fa kosa tokony tokony hampidirinao ao anaty paikadinao ny media sosialy mba hahitana vokatra tsara kokoa. Dominique Jackson, Sprout Social
Ahoana no tokony hitovizan'ny paikadin'ny media sosialy B2B anao?
tanjona - ny tanjon'ny paikadin'ny media sosialy B2B dia mifantoka amin'ny feo, fifamoivoizana, fitarihana ary fiovam-po. Ny paikadin'ny mpanjifa dia matetika mifantoka amin'ny marika, fitomboan'ny mpihaino ary ny fahatsapana. Raha lazaina amin'ny teny hafa… mikendry mifanohitra amin'ny volavola.
Strategy - atiny, fampiroboroboana ary Analytics no ifantohan'ny tetikady media sosialy B2B. Ny paikadin'ny mpanjifa dia mety mifantoka amin'ny tsy fivadihan'ny marika, ny serivisy ho an'ny mpanjifa ary ny fananganana vondrom-piarahamonina.
Content - Ny atiny B2B dia novolavolaina mba hampianarana sy hitaomana ny mpihaino ny orinasa hanangana fahatokisana amin'ny vinavina. Tetikady ho an'ny mpanjifa no ampiasaina hananganana ny mombamomba ny marika sy hampitomboana ny vondrom-piarahamonin'izy ireo an-tserasera.
Tags: b2bpaikadin'ny media sosialy b2bb2b mifanohitra amin'ny media sosialy b2cb2cpaikadin'ny media sosialy b2cfanapahan-kevitra-mpanaoDominique Jacksontalenta varotravalin'ny media sosialyvaliny paikady media sosialyhaino aman-jery sosialyfivarotana ara-tsosialypaikady fivarotana sosialymitsimoka sosialy